OGEYSIIS MUHIIN AH:FADLAN AKHRI INTA AADAN KA CODEYN .
Saturday March 30, 2019 - 15:01:25 in Articles by G. Good
KU:- KA QAYBGALAYAASHA COD-QAADIS TIJAABO AH
Waxaan halkan ugu mahad celinayaa dhamaan dadka Reer Hargeysa iyo Nawaaxigeeaa deggan ee fikirkodii soo dhiibtay, fadlan iga qaado taladdan marka hore intaadan Codkaaga qiimaha leh i siinin:-
1.Waa inaad tahay qof KAADHKII Codeynta haysta ama qaadan doona .
2.Qofka ay u qorshaysan tahay in uu Codeeyo maalinta la codeyn doono, kana codeyn doona MAROODIJEEX oo kaliya.
3 Ogaada waxaan wax idiin weydiistay Codkiina si QADARIN & XUSHMEYN LEH.
4.Ma gayo,qofna ma jecla in la caayo, la af-lagaadeeyo,luguna sheego wax uuna aheyn.
5. Caruurta iyo kuwa buka looma ogola Barnaamijyaddan oo kale in ay ka qaybqaatan.
6. Kuwo idinka idiin ka midow, Haygu la dhicina SHAKHSI NACEYB,REEREYSII,QABYAALAD,XIQDI,JAAHILNIMO KOOXEYSI,GOBALEYSI, iwm
7. Kuwo idiinka midow, Ha ii tiigsanina,ha iguna cabirina Shakhsiyaadka idin Jiyad jabiyay ee Afka dhulka idiin daray markii aad doorteen,ka saliim ban ahaye.
8. Waxaan ogahay ha igu celcelinina oo ah in Golaha Deggaanka in an marka hore la soo galo,dabadeed la iska sii dhex sharxo .Waxa jira two factors oo ah:- Anigu Rashiid ahaan Nidaamkan ku saleysan qabyaaladda ee lagu fashilmey haddi lagu soo celiyo ,anigu ku ma jiro absolutely mana galaayo Doorasho sidaasi ah.Labo:- waxa dhici karta in Dawlad iyo Shiciba la isla qaato in laga guuro Nimaadkaasi oo sharci Cusub lagu badalo oo ah qofka marka hor Xisbigiisu soo saaro,dabadeedna saddexda Xusbi soo baxa dadweynuhu kalo sii doorto,taasi uun baan haweysan kara. Warkayguna waa CAD YAHAY.
9. HAA IYO MAYA uun taabo kii aad dooneysid ,waayo dhawr kun oo qof faallo dheer wakhti uma hayo,inay cidla ku dhacdana laga wanaagsan!.
10. Intiina an fahansaneynin Cod-qaadistan tijaaboda ahi,waa wax adduunweynaha ka dhaca ,waana wax kaligay i khuseeya oo aan ujeedo ka leeyahay haddii Maanta ay dhacdo Doorashadaasi halka ay dadkaygu iga taagan yahiin,maadama Wakhti badan iyo tacab badani iga galay.
11.Diinteena Suubani illama ah in ay diideyso ama ka soo horjeedo qofkii Nidaam jira oo bulshadiisa ka dhex jira ku fakara, una helooba in uu wax wanaagsan oo Diin iyo Dad iyo Dalba ku soo kordhiyo.
11. Fadlan ha I weydiinin Reerkayga, C-Vga, Xusbigayga ,iwm,waayo kuwaasi imika iyo halkan ma joogto ama kuma habona.
12.Cod-qaadistani natiijadeedu aniga ayuun bey ii tahay SAMPLE oo kaliya.
13.Waxii talo fayow ah ee ad u aragto lama huraan , fadlan ku soo dir E-mailkan[email protected]
14. Waxaan ahay kii dul qaadanaaya waxii ka yimaada arrinkan ,waayo badanka dadkeygu uma baran tan oo kale.
15.Marka hore isla Pagekaasi ka daawo 4 Barnaamij oo an soo bandhigaayo Qorshahayga wax-qabadka.
16.Fadlan ku gal Page-kayga …Haldoor Rashiid Sulub Caalin.
17.Waad mahadsantahay Cod-bixintaada iyo dhegeysiga
18. Fadlan ha igula dhicin oo igala xishood,wax aan hadda i khuseynin oo ah "REERKAASI AYAA DOORKAN LEH & IYO HEBBEL BAANU SOO SAAREYNA, iyo waxaad u socota in aad XOOLAHA UMMADDA aad cuntid.” walaal waxa aniga Rashiid ahaan igu xidhan ama i riixaya waa hamigeyga in an ka rumeeyo oo ah rabitaan in aan wax ka qabto Magaaladii aan ku dhashay HARGEYSA oo silicsan iyo Waddankii wax badan i gashadey oo ay ka mid yahiin fursad qaali ah oo TACLIIN BILAASH ahed iyo in wax laygu baray si haybad leh oo an waxba la igala hadhin oo wa Alleh mahadeeye iga dhigtay Qof aan maanta ahay.
Rashid Sulub Caalin